Muxuu damacsan yahay Jawar Maxamed, ninka ay kala boodeen Dr.Abiye Axmed? – Xeernews24
Muxuu damacsan yahay Jawar Maxamed, ninka ay kala boodeen Dr.Abiye Axmed?
Jawar ayaa Al Jazeera u sheegay in uu doonayo in uu ku biiro siyaasadda Itoobiya, kana fikiraya in uu tartamo doorashada xigta ee la filayo in dalkaas ay ka dhacdo sannadka dambe.
In qofka uu ra’iisul wasaare ka noqdo dalkaas ayaa waxaa uu u baahan yahay in ay taageeraan xubnaha xisbiga talada haya ee EPRDF. Sidoo kale in shakhsi uu Madaxweyne ka noqdo mid ka mid ah dowlad deegaanada sida Oromiya oo kale ayaa sidoo kale waxaa looga baahan yahay in uu noqdo xildhibaan golaha deegaanka, kadibna uu kamid noqdo guddiga fulinta ee xisbiga talada haya ee deegaanka.
Waxaa jiray warar sheegaya inay isaga iyo ra’iisalwasaaraha Itoobiya Dr Abiy Axmed oo horay xulafo u ahaa ay kala boodeen.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2019/10/Jawhar.jpg 960 720 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2019-10-25 09:39:372019-10-25 09:39:37Muxuu damacsan yahay Jawar Maxamed, ninka ay kala boodeen Dr.Abiye Axmed?
Goobihii Ganacsiga ee magaalada Diri-dhabe oo ilbaaba loo laaban Rabshado Socday... Wararkii ugu dambeeyey XIISADDA ka dhex-aloosan dalalka MASAR iyo ITOOBIYA.